Ungayinikeza kanjani inja ngomjovo ongaxutshiwe | Izinja Umhlaba
Ungayinikeza kanjani inja umjovo ongaphansi
Kuyo yonke impilo yomngane wethu othandekayo onemilenze emine, kuzodingeka kakhulu ukumyisa kudokotela wezilwane ukuze ahlolwe. Ngale ndlela, noma yisiphi isifo esingahle sikuthinte singatholakala ngesikhathi.
Ngokuya ngenkinga nokwelashwa kwayo, kwesinye isikhathi udokotela wezilwane angancoma ukuthi siyelaphe ekhaya. Kepha, Uyazi ukuthi ungawunikeza kanjani inja umjovo ongaphansi kwesikhumba? Uma impendulo inguye, ungakhathazeki: siyakufundisa.
1 Amathiphu wokunikeza umjovo ongaphansi
1.1 Yehlisa umoya
1.2 Lungisa inja yakho
1.3 Mnikeze umjovo
1.4 Klomelisa umngani wakho
2 Ungayinikeza kanjani injana umjovo ongaphansi
3 Imiphumela emibi yemijovo engaphansi
4 Ubungozi bokuthola umjovo ongena ngaphansi kwesikhumba akulungile
5 Ungayifaka kanjani i-glucantime enjeni
6 Ungayifaka kanjani i-urbason enjeni
7 Ungayinamathisela kanjani inja ngama-antibiotic
8 Ungayinikeza kanjani inja umuthi wokugoma
9 Ungayinikeza kanjani inja i-serum engaphansi kwesikhumba
Amathiphu wokunikeza umjovo ongaphansi
Kubaluleke kakhulu ukuthi yiba nokuzola ngangokunokwenzeka ukuze inja ikwazi ukuzwa kahle. Uma unovalo kakhulu, phefumula kaningana uze ukwazi ukunciphisa izinzwa. Futhi-ke, uma wesaba izinaliti, unganqikazi ukucela usizo kumakhelwane noma kumngane, noma uhlole udokotela wezilwane ukubona ukuthi umuthi unganikezwa ngenye indlela yini.
Lungisa inja yakho
Ukunikeza umjovo empeleni kulula kakhulu futhi akuthathi ngaphezu kwamasekhondi ambalwa, kepha kufanele wenze konke okusemandleni ukwenza isipiliyoni sibe mnandi ngangokunokwenzeka esilwaneni. Ngakho-ke, Ngaphambi kokuyibeka, ngincoma ukuthi uchithe imizuzu embalwa udlala ngayo nokumnika uthando oluningi. Lokhu kuzoniphumuza nobabili.
Uma usulungile, hlanza indawo lapho kufanele ujove khona (udokotela wezilwane uzokutshela) nge-hydrogen peroxide ne-gauze ukugwema ukutheleleka. Manje, thatha isikhumba sakhe kube sengathi isandla sakho siyi-forceps, bese ufaka inaliti. Kumele uqaphele ukuthi kuhamba kahle. Bese ufaka uketshezi.
Klomelisa umngani wakho
Ngokuziphatha kwakho okuhle, kubalulekile ukuthi uklomelise inja yakho ngokwelashwa, caresses, imidlalo, noma yini oyithanda kakhulu. Ngale ndlela ngeke azizwe kabi ngaso sonke isikhathi lapho kufanele umjovo futhi.
Ungayinikeza kanjani injana umjovo ongaphansi
Ngokungafani nokujova kanye / noma ukugoma inja esivele ineminyaka ethile, imidlwane ngamacala akhethekile. Lokhu ngesizathu esilula sokuthi akuzona zonke izinja ezincane ezingafakwa ekhaya.
Ngale ndlela sizokunikeza uchungechunge lwezincomo ukuze wazi ukuthi ungayijova kanjani imidlwane. Nquma ukuthi hlobo luni lomuthi wokugoma oludingayo ngomdlwane wakho, noma ngabe uphakathi noma ubalulekile. Yini enye, kufanele ucabangele indawo ohlala kuyo njengemijovo yokujova kanye nemijovo engaphansi koncike endaweni lapho umdlwane uhlala noma uzohlala khona.
Kufanele uthenge ngqo amaphakheji wokugomela imidlwane, ngoba lokhu kuletha umthamo onconyiwe nezinto ozodinga ukuzijova. Gcina imijovo nezixazululo esiqandisini.
Umuthi wokugoma wokuqala kufanele uhlanganiswe. Okusho ukuthi, umjovo wokuqala kufanele ube noketshezi oludingekayo ukulwa namagciwane ama-3 kuye kwayi-5. Kuzofanele ufake isicelo phakathi kwamasonto ayisithupha kuya kwayi-6.
Imijovo yemidlwane inikezwa ngendlela efanayo nenja endala. Umehluko ukuthi amanani we-booster kufanele asetshenziswe njalo emavikini ama-3, ngokungafani nabantu abadala abawadingayo kanye ngonyaka.
Imiphumela emibi yemijovo engaphansi
Imiphumela emibi izoncika kakhulu emthamo owunikeza isilwane sakho, ukusabela okweqile emithini, kanye nesimo inja enaso ngaphambi kokufaka umjovo.
Kanjalo, lena eminye yemiphumela emibi ezinjeni:
Izinkinga zokugaya ukudla.
Ukuthuthukiswa kwezifo zefungal.
Ukusetshenziswa kwamanzi okuphezulu.
Ubungozi bokuthola umjovo ongena ngaphansi kwesikhumba akulungile
Kungenzeka ukuthi wakuthola kulula ukunikeza imijovo yokugoma, imijovo nama-serum, kepha iqiniso ukuthi imijovo engaphansi kwesikhumba inezinkinga zayo. Lokhu kungenxa yokuthi isilwane kudingeka ukuthi sibe sesimweni esingakhululeki neze kubo. Okugcina kubenza batatazele.
Esimeni esibi kakhulu, ungagcina usufaka umuthi wokugoma emthanjeni futhi lokhu kungababulala, ngoba bayizidakamizwa kanye / noma izindlela zokwelapha okuhloswe ukuthi zifakelwe izicubu ezingaphansi kwesikhumba.
Ungayifaka kanjani i-glucantime enjeni
Isikhathi somzimba Kuyinto yokwelashwa eza ngesimo sama-ampoules ukwelapha izifo kubangelwa i-leishmaniasis enqamulelayo futhi visceral ezinjeni. Isixazululo siza ngamaphilisi noma ama-ampoules ongawafaka inja yakho ngaphansi kwesikhumba, ngoba kuyinkinga engeke inyamalale ngosuku, kufanele uhlabe umjovo ka-0.33 ml / kg ngosuku.
Uma kwenzeka unethuba lokunikeza umuthi isikhathi esingaphezu kwesisodwa ngosuku, zama ukuhlukanisa umthamo nokuthi izikhawu ziba njalo emahoreni ayi-12, okungukuthi, uma ujove inja yakho ngo-10 ekuseni, kufanele ujove kuphela u-0.165 ml / kg kuphela . Enye ingxenye izokhokhwa ngo-10 ebusuku. Lokhu kwelashwa kufanele kunwetshwe okungenani amasonto amathathu, uma kunesidingo, kunganwetshwa elinye isonto.
Ungayifaka kanjani i-urbason enjeni
I-urbason kungumuthi obabazekayo futhi osebenza kahle ukwelapha izifo eziningi zokuvuvukala nezaliwa yizinja. Ukukunika umbono, i-dermatitis kanye ne-allergen reaction kuyaphathwa ngalo muthi. Ngakho-ke, ifomethi yokujova kuzofanele isetshenziswe ezimeni eziphuthumayo kuphela.
Endabeni yemijovo, kuzodingeka ucabangele isisindo nobukhulu besifo sakho, ngoba inani olisebenzisayo nesikhathi osidingayo kuzoncika kulokhu. Ngokuvamile, kufanele uyijoje njalo emahoreni angama-24 noma njengoba kungenzeka, kabili ngosuku ngezikhathi ezingamahora ayi-12.
Ungayinamathisela kanjani inja ngama-antibiotic
I-penicillin Yimithi elwa namagciwane ephakanyiswe kakhulu ukwelapha ukutheleleka inja yakho enakho. Kukhona ne-amoxicillin esetshenziselwa ukwelapha indlebe, isikhumba, umgudu wokuchama nezinye izifo. Ukufaka ama-antibiotic esilwaneni sakho, Kufanele uqale uye kudokotela wezilwane ukuze akwazi ukuncoma umthamo wokujova.
Imvamisa zingu-5 kuye ku-10 mg njalo emahoreni ayi-12 kuye kwangama-24, into okufanele uyenze kuze kube yilapho izimpawu sezihambile ngokuphelele. Kubaluleke kakhulu ukuthi ungayisebenzisi ngokwakho inja yakho. Ukwenza kanjalo kungamthinta kabi futhi kwenze isimo sakhe sibe nzima.
Ungayinikeza kanjani inja umuthi wokugoma
Njengoba kubalulekile inyoni yethu ezinyangeni ezimbalwa ngemuva kokuzalwa, nikeza imigomo ehambisanayo izoyivimba kakhulu ukuthi ingafi. Kunezimo eziningi zezinja ezingafakwanga izikelemu kanye / noma ezigonywayo ezigcina zifa ngemuva kwezinyanga ezimbalwa zizelwe.
Ukugwema le nhlekelele, sizokunikeza uchungechunge lwemiyalelo okufanele uyilandele ukuze ugcine inja yakho iphilile nemithi ehambisana nayo. Thenga imigomo oyidingayo ukuze ujove inja yakho. Ungazisebenzisa ngokushesha onazo noma uzigcine esiqandisini ukuze ugcine ubuqotho bazo.
Hlanganisa impuphu noketshezi okwakha umuthi wokugoma bese usebenzisa isirinji ukukhipha isisombululo. Sebenzisa utshwala obuncane endaweni ozofaka kuyo umjovo. Le ndawo izoba ngemuva kwentamo yenja. Okungukuthi, nje sidlule ihlombe.
Phakamisa isikhumba senja endaweni eshiwo ukuze ibe nokumila kwetende bese ufaka inaliti esikhunjeni. Susa ngokucophelela isirinji bese uqinisekisa ukuthi awuthintanga imithambo. Uma kwenzeka ubona igazi liphuma, kuzofanele uqale phansi (okwamanje awukasifaki isixazululo).
Uma uqaphela ukuthi lapho ukhipha inaliti kancane, akuphumi ngisho nethonsi legazi, lapho-ke ungafaka inaliti futhi ujove ikhambi noma umuthi wokugoma, kungakhathalekile ukuthi kunjani. Uma ususa inaliti ngemuva kokugoma, gcoba ngobunono indawo lapho wagcoba khona umuthi wokugoma ngeminwe yakho.
Njengolwazi olwengeziwe ukuze ungalukhohlwa qaphela usuku, uhlobo lomuthi noma umuthi wokugoma osinikeze isilwane sakho, ngoba imithi yokugoma kufanele iphindwe kanye ngonyaka. Ngakolunye uhlangothi, uhlobo lomuthi wokugoma oludingwa yisilwane sakho luzoncika kakhulu endaweni okuyo. Futhi, ungathathi isikhathi eside ukufaka imigomo ngoba igcina ilahlekelwe yimiphumela yayo eminingi.
Ungayinikeza kanjani inja i-serum engaphansi kwesikhumba
Njengoba kungenzeka ukuthi uqaphele esigabeni esedlule, ukunikeza imijovo nemithi yokugoma akunzima nakancane, inqobo nje uma uqaphela. Endabeni yama-serum angaphansi kwesikhumba, kwenzeka into efanayo. Kepha uma ungazethembi ngokwanele ukuthi uzisebenzise, ​​sincoma ukuthi ufune usizo lochwepheshe.
Ngendlela efanayo, sizochaza ukuthi ungayifaka kanjani i-serum ezinjeni zakho uma ziyidinga. Faka i-serum inqobo nje uma inja ezokwelashwa idinga uketshezi olukhulu emzimbeni wayo, ngoba kungokwelapha ukuthi izinga layo lokumuncwa lihamba kancane.
Kufanele ube nokugcotshwa okuphezulu kwekhwalithi, ukuze uketshezi oluzonikezwa lungahlali esikhaleni esingaphansi kwesikhumba, okungukuthi, alumunciwe kahle. Thenga uhlelo lokumnika okuqhubekayo noma ungathola inaliti, umhlahlandlela nesaka le-serum enekamelo lalo lokwehlisa.
Faka i-serum noma umuthi ku-pacifier yerabha ngomjovo. Lungisa ijubane lokwehlisa i-serum ngokhiye onesistimu oyisebenzisayo. Bheka ukuthi azikho yini izikhala zomoya ohlelweni ngaphambi kokujova inja yakho.
Gcina i-sachet kahle ngaphezu kwenja, ngakho amaconsi azowela ngenxa yamandla adonsela phansi. Qiniseka ukuthi inja ihlala izolile imizuzu embalwa yokuqala kusukela ngokuya ngohlamvu lwakho, le mpatho ingabonakala icasula.
Ngakho-ke, sinethemba lokuthi i-athikili ibikade iyintandokazi yakho futhi isebenze njengesiqondisi esifundisayo wena nezinja zakho ekhaya.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » Ungayinikeza kanjani inja umjovo ongaphansi
Lapho kufakwa khona umjovo we-IVOSIG ngenja eneminyaka engu-3,4 ubudala ngomange
Umchamo Omnyama Ezinjeni
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi inja ekhonjiwe ilulame?